कोरोनाबाट प्रभावित व्यक्तिले के के सुविधा पाउँछन् ? – NepalayaNews.com
कोरोनाबाट प्रभावित व्यक्तिहरूले के सुविधा पाँउन र के के गर्नु पर्छ भनेर जानकारी मूलक सूचना तयार गरी न्युयोर्कमा रहेका सिपिए बिराज रिजाल द्वारा तयार पारिएको जानकारी ।
कोविड १९ का कारण काम गुमाएका व्यक्तिहरुका लागि थप जानकारी :
कोविड १९ फेडरल विलले प्रत्यक्षरुपमा रोजगार गुमाएका व्यक्तिहरुका लागि रोवोस्ट अनइम्प्ल्वाइमेन्ट इन्स्योरेन्सको (Robust Unemployment Insurance) व्यवस्था गरेको छ । यो फेडरल विलले व्यवस्थागरेको सुविधाहो तर यसलाई व्यवस्थापन गर्नकालागि राज्यसरकार मार्फत हुनेछ । यो राज्यले प्रदानगर्ने Unemployment Insurance भन्दा फरक किसिमको छ त्यसैले यसलाइ व्यवस्थापन गर्न राज्यसरकारले छिट्टै जानकारीगराइने भनिएको छ ।
Unemployment Insurance फाइलगर्नकालागि २ फरक प्रकारका क्लेम फाइल कसरिगर्ने भन्ने बारेमा छोटो जानकारी यसमा समेटिएको छ ।
1) राज्यसरकारवाट दिने परम्परगत Unemployment Insurance सुविधा :
यो सुविधा पेरोलमा कामगर्ने व्यक्तिकालागि मात्र उपलव्ध छ । न्यूयोर्कको हकमा यो सुविधा २६ हप्तासम्म रहेकोछ । तर फेडरलसरकारले अरुथप १३ हप्ता सम्मदिने भनिएको छ । यसो भएमा जम्मा ३९ हप्तासम्म पाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
यो अनइम्ल्वाइमेन्ट इन्स्योरेन्स फाइलगरेपछि अन्य कुनै काम पैसालिएर वा नलिएर जुनसुकै प्रकारको काम गरियो भने यो सुविधा पूर्ण वा आंशिकरुपमा नदिने सम्भावना हुन्छ । तर यसरि गरिएको काम कति दिन गरिएकोछ त्यसमा भर पर्ने हुन्छ । एकदिन बराबरको यसरिगएिको कामवाट प्रत्यकदिनको वेनिफिटवाट २५ प्रतिशतका दरले घटन जान्छ । यसरि हप्ताको चारदिन यस्तो कामगरेको अवस्थामा यो सुविधा पूर्णरुपमा वन्द हुन जान्छ । यो अति महत्वपूर्ण छ किनकी तपाईले डिर्पाटमेन्ट लेवरलाई सहि जानकारि समयमा दिनु भएन र पछि जानकारीमा आयो भने यहाले प्राप्तगरेको वेनिफिट फिर्ता गर्नुपर्नेपनि हुन्छ ।
कामको धेरै बोझ भएको कारण न्यूयोर्कलगायत अरु राज्यका डिर्पाटमेन्ट लेवरले आफ्नो थर अनुसार विभिन्न लास्टनेम भएका व्यक्तिले फरकदिनमा फारमभर्नहुन जानकारिगराएको छ । त्यसैले आफ्नो स्टेटको डिर्पाटमेन्ट लेवरको वेभसाइटमा गइ आफ्नो क्लेमको जानकारि गराउनु होला ।
साधरणतया कामवाट वाहिरिएको एकहप्ताभित्र डिर्पाटमेन्ट लेवरमा फर्म भरिसक्नु पर्ने छ । तर अहिले अतिधेरै निवेदनहरु भएको कारण केहि ढिलाभएपनि समयमा फाइलगरेको मान्न सक्छ । तर धेरै ढिलागरेर नवस्नुहुन जानकारि गराइन्छ ।
2) संघिय (Federal) सरकावाट दिइने Robust Unemployment Insurance सुविधा :
यो विशेष प्रकारको Unemployment Insurance सुविधा हो । यो सुविधा Disaster Unemployment Assistant को माध्यमवाट संघिय सरकारले दिने गर्दछ । त्यसैले संघिय सरकारले यो महामारिमा विभिन्न किसिमका कामवाट जनताले दैनिक आय गुमाएको कारण घोषणा गरेको विशेष प्रकारको (Robust Unemployment Insurance) हो । यस व्यवस्थामा प्रत्येक प्राप्तकर्ताले प्रतिहप्ता ६०० डलर पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो सुविधा स्वरोजगारदाता, इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट््रयाक्टर, र छोटो अवधिमात्र कामगर्नेहरुले पनि लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
जसले स्टेटवाट प्राप्तगर्ने Unemployment Insurance सुविधा लिन शुरुगरिसक्नु भएको छ उहांहरुले यो सुविधाकालागि छुट्टै फर्म भर्नु पर्ने छैन् ।
अन्य योग्य व्यक्तिले आफुले वसोवास गरेको स्टेटको डिपार्टमेन्ट लेवर मार्फत आफ्नो फर्मभर्नु होला । यसरि फर्मभर्दा आफ्नो स्वरोजगारको यथार्थ विवरण दिनु होला । यो प्रकारको सुविधा विशेष प्रकारको भएको कारणले यसको वारेमा धेरै जानकारिहरु डिपार्टमेन्ट लेवरले पनि दिइसकेको अवस्था छैन् । त्यसैले आफ्नो सहि जानकारिसहित फर्म भर्नु भएमा केहि सोधपुछ गर्नु पर्ने भएमा डिपार्टमेन्ट लेवरले यहांलाइ सम्पर्क गर्ने छ ।
कामको धेरै बोझ भएको कारण न्यूयोर्कलगायत अरु राज्यका डिर्पाटमेन्ट लेवरले आफ्नो थर अनुसार विभिन्न लास्टनेम भएका व्यक्तिले फरकदिनमा फारमभर्नहुन जानकारिगराएको छ । त्यसैले डिपार्टमेन्ट लेवरको वेबसाईटमा गएर आफ्नो फाइलगर्ने दिनको जानकारि लिनु होला । न्यूयोर्क स्टेटको हकमा निम्न अनुसार व्यवस्था गरेको छ ।
NYS Department of Labor Website: labor.ny.gov
For last names starting with G – N, file your claim on Tuesday.
For last names starting with O – Z, file your claim on Wednesday.
गूगल मिट एक घण्टा मात्रै नि : शुल्क १६ चैत्र २०७६, आईतवार ०२:०९
कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि ३५ अर्ब अमेरिकी डलरको माग १६ चैत्र २०७६, आईतवार ०२:०९
कोरोना असर- डिज्नेले दुई राज्यबाट २८ हजार कामदार हटाउने १६ चैत्र २०७६, आईतवार ०२:०९